အထူးလျှော့စျေးဖြင့် LEAGOO M9 အသစ်ကိုယခုမှာယူပါ Androidsis
လူးဝစ်လိုပက်ဇ် | | မိုဘိုင်း, လဲ tutorial
ယခုအချိန်တွင်အာရှတိုက်မှမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်သူများသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုအတုခိုး။ မိမိတို့၏လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဖန်တီးရန်ရပ်တန့်သွားသည်။ LEAGOO M9.
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း LEAGOO သည်အခြားအရာများထက် ၄ င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် LEAGOO M9 သည်စျေးကွက်အတွင်းနှင့်မည်သည့်အချိန်၌အလယ်အလတ်တန်းစားရှိအလှဆုံးဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ပါးစပ်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ဈေးနှုန်းကြိုတင်မှာယူမှုကိုသင်သိလိမ့်မယ်။
1 LEAGOO M9 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
2 ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် LEAGOO M9 အသစ်ကိုယခုမှာယူပါ
LEAGOO M9 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
LEAGOO M9 တွင်aIPS နည်းပညာနှင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Corning Gorilla Glass 5.5ထို့အပြင်၎င်းတွင်မိုဘိုင်း၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲမျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုကြီးမားစေသည့် bezel-less ဒီဇိုင်းရှိသည်။
မိုဘိုင်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည် Processor ကိုရှာသည် Mediatek MT6580 ဖြင့်လိုက်ပါသွား quad-core2GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 16 GB.
dual-main camera setup သည်ယနေ့ခေတ် high-end ဖုန်းများအတွက်အလွန်ဖက်ရှင်ကျလာသည်။ ဤကိစ္စတွင် LEAGOO သည်နောက်ထပ်သွားခဲ့သည် M9 ကိုကင်မရာလေးလုံးထပ်တိုးလိုက်သည်အရှေ့ဘက်တွင်5MP နှင့်2MP နှစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး LED Flash နှစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးနောက်ဘက်တွင် MP 8 MP နှင့်2MP နှစ်ခုထည့်သွင်းထားပြီး LED Flash နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ထင်ရှားသောထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ LEAGOO M9 တွင် l တစ်ခုပါရှိသည်0.1 စက္ကန့်အတွင်း terminal ကိုသော့ဖွင့်သည့်လက်ဗွေ ector မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလက်ချောင်းအနေအထားကို ၃၆၀ ဒီဂရီအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အာရှဈေးကွက်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိခြင်းကြောင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ဤကိစ္စတွင် LEAGOO M9 သည်ခြွင်းချက်မရှိပါ။ ယင်း 2850 mAh ဘက်ထရီ ၎င်းကိုတစ်နေ့လုံးစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်နှင့် Standby တွင်ခုနစ်ရက်အထိကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် LEAGOO M9 အသစ်ကိုယခုမှာယူပါ
သင်ဟာ LEAGOO M9 မှာအလယ်အလတ်ကုတင်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းရှိတယ်လို့သင်ထင်နေပါတယ် el က galaxy J7 o Moto G5 Plusဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးမှားနိုင်ဘူး။
El LEAGOO M9 ၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၇၉ ဖြစ်သည်သို့သော်ကြိုတင်ထုတ်လွှင့်မှုမြှင့်တင်ရေးအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီမှကူပွန်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် ၃၀% လျှော့စျေး, ရန်စျေးနှုန်းကိုလျော့နည်းစေသည် သာ $ 59.99 ဒေါ်လာ.
LEAGOO M9 သည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကိုချိုးဖောက်ပြီးကင်မရာလေးလုံးနှင့်မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး terminal ဖြစ်ခြင်းမှာသံသယရှိစရာမလိုပါ။နယ်နိမိတ် ' နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ. အောက်ပါ link ကိုအသုံးပြု။ ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မြှင့်တင်ရေး၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
LEAGOO M9 ကို ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာဝယ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LEAGOO M9 အသစ်ကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ